डेंगु जस्तै स्क्रब टाइफसको संक्रमण बढ्दो : बच्नको लागि डाक्टरको सुझाब यस्तो छ... - Ankuran Khabar
Wed, Jan 20, 2021 / २०७७ माघ ७, बुधबार
आज डाकिएको प्रदेश १ को संसद अधिवेशन बैठक प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर स्थगित... २०७७ माघ ७
काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा भोला थापा नियुक्त... २०७७ माघ ७
भारतले उपलब्ध गराएको कोरोनाको १० लाख डोज खोप भोलि ल्याइँदै... २०७७ माघ ७
प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नरहेको वकिलहरुको जिकिर... २०७७ माघ ७
अदालतले संविधान हेरेर असंवैधानिक कदम सच्याउनु पर्छ : गगन थापा... २०७७ माघ ७
२०७६ भाद्र २०0
अहिले देशैभर डेंगुको प्रकोप बढ्दो छ । डेंगुसंगै स्क्रब टाइफस रोगका बिरामी पनि बढेका छन् । स्क्रब टाइफस रोग बारेमा धेरै मासिन अनविज्ञ छन् । जसका कारण नेपालमा धेरै नागरिक यसको जोखिममा छन् । यो रोगका धेरैजसो लक्षण सामान्य ज्वरोसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि मानिसहरू झुक्किने गर्छन । यस्तो अवस्थाका स्क्रब टाइफस के हो ? यो कसरी लाग्छ र यसबाट कसरी जोगिने ? कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा.रामकृष्ण बरालसंग अंकुरण खबरको टिमले गरेको कुराकानीमा आधारित अंश…
नेपालमा स्क्रब टाइफसका बिरामी बढीरहेको पाइन्छ । अहिले डेंगुले जसरी महामारीको रुप लिएको छ त्यसैगरि बेलैमा सावधानी नअप्नाए स्क्रब टाइफसले पनि महामारीको रुप नलेला भन्न सकिन्न । देशका विभिन्न स्थानमा यो रोगका संक्रमित बढेको पाइन्छ । थोरै सावधानी अप्नाए यो रोगबाट पूर्ण बच्न सकिन्छ भने, लाप्रबाही गरे ज्याननै जान्छ ।
चीनमा तेस्रो सताब्दीमा पहिलो पटक स्क्रब टाइफस देखापरेको थियो । नेपालमा भने यो देखा परेको धेरै समय भएको छैन् । तर पनि यो रोगले बेलाबेलामा मानिसको ज्यानै लगेको छ । नेपाल जस्तो विकाशोन्मुख र धेरैजसो व्यक्ति कृषिमा निर्भर भएको देशमा स्क्रब टाइफसको जोखिम उच्च हुन्छ । स्क्रब टाइफसलाई बुस टाइफस पनि भनिन्छ । यो रोग ओरेन्सिया सुसुगमुसी नामक पराजिवीको संक्रमणबाट सर्छ ।
यो रोग लाग्ने कारण
माइट नामको संक्रमित किर्नाले टोक्दा यो रोग मानिसमा सर्छ । विशेषगरी घाँसपात, झाडीमा काम गर्ने मानिसमा यो रोगको सम्भावना प्रवल रहन्छ । झाँडीमा काम गर्दा संक्रमित किर्नाले टोक्यो भने,संक्रमित मान्छेको रगत लिएमा पनि यो रोग लाग्छ ।
यो रोगको संक्रमण भएको करिब ५ देखि ७ दिनदेखि लक्षण देखिन थाल्छ । यो रोगका लक्षण ज्वरोसंग मिल्दाजुल्दा छन् । तर पनि निम्न लक्षण देखापर्छ :
1.एक्कासी ज्वरो आउनु ।
2.श्वास फेर्न गाह्रो हुने ।
3.शरीरमा एलर्जी जस्तो बिबिरा देखिनु ।
4.टाउको दुख्नु ।
5.खोकी लाग्नु ।
6.शरीर आलस्य हुनु ।
7.खाना अपज हुनु ।
8.वान्ता हुने ।
9.जन्डिस हुने ।
यसको बेलैमा उपचार गरिएन भने संक्रमण बढ्दै गएर मुटु, कलेजो, मिर्गौलामा समेत गम्भीर असर पुग्छ ।
यो रोग लागे नलागेको पत्ता लगाउन रगतमा एन्टीजेनको अवस्था हेर्नुपर्छ । यसैलाई आधार मानि बिरामीको अवस्था हेरी कुन उपचार पद्धति अवलम्बन गर्ने, कुन औषधि चलाउने भन्ने एकीन गरिन्छ । बच्न के गर्ने स्क्रब टाइफस ग्रामीण क्षेत्रका मानिसमा मात्र देखापर्छ भन्ने थियो । यसको संक्रमण शहरी क्षेत्रमा समेत देखापरेको छ ।
यसबाट बच्ने प्रमुख उपाय भनेको संक्रमित किर्नाको टोकाइबाट बच्नु हो । यसबाहेक निम्न सावधानी अपनाउनु पर्छ । 1.खेतबारीमा काम गर्दा शरीर ढाक्ने कपडा लगाउने ।
2.खुट्टामा बुट, हातमा पन्जा र टाउको ढाक्ने कपडा लगाउने
3.घर वरपर सफा राख्ने ।
4.भुइँमा बस्दा केही ओच्छ्याएर मात्र बस्ने ।
माथिका कुनै पनि लक्षण देखिए तुरुन्त स्वास्थ परीक्षण गराउनु पर्छ । बेलैमा उपचार गरिएन भने यो रोगले ज्यानै लान सक्छ ।
कुवेतसँग नेपालको लज्जास्पद हार
विद्यालय जाने क्रममा १५ वर्षीया एक छात्रामाथि एसिड प्रहार
Breaking News आज डाकिएको प्रदेश १ को संसद अधिवेशन बैठक प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर स्थगित
शिक्षा काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा भोला थापा नियुक्त
Breaking News भारतले उपलब्ध गराएको कोरोनाको १० लाख डोज खोप भोलि ल्याइँदै
Breaking News प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नरहेको वकिलहरुको जिकिर
Breaking News अदालतले संविधान हेरेर असंवैधानिक कदम सच्याउनु पर्छ : गगन थापा